ချွတ်ဆေးကြောင့် လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပြီး ပျက်စီးနေတဲ့ဆံပင်တွေကို ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
ဘယ်လိုလုပ်မှ ဆံပင်ပျက်စီးတာတွေ ပြန်ကောင်းလာမလဲ?
ဆံပင်အရောင် အလန်းလေးဆိုးချင်တယ်။ မူလအရောင်က အနက်ရောင်ဆိုတော့ ဒီတိုင်းဆိုးလို့မရဘူး။ ဒီတော့ ချွတ်ဆေးနဲ့ အရောင်ချွတ်လိုက်ရရော။ အဲ့ဒီမှာ ဆံပင်အရောင်က လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သွားတယ်။ စိတ်ညစ်လိုက်တာ ဘာအရောင်မှန်းကိုမသိဘူး။ ဆံသားတွေလည်း ပျက်စီးကုန်ပြီ။ ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မှ ဆံပင်ပျက်စီးတာတွေ ပြန်ကောင်းလာမလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံလူတွေရဲ့ ဆံပင်က အနက်ရောင်ဆိုတော့ ချွတ်ဆေးသုံးသူ ၁၀ ဦးမှာ ၈ ဦးက လိမ္မော်ရောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင်ကိုမှ အနုအရင့် အမျိုးမျိုး ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဆေးရောင်ဆိုးပြီး လိမ္မော်ရောင်ကို မဖုံးလိုက်ပါနဲ့။ ဆံပင်ပိုပျက်စီးရပါတယ်။ ဆံပင်အရောင်ကို ညှိပေးနိုင်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကိုသုံးပါ။ ချွတ်ဆေးတွေကိုလည်း ဓာတ်ပြယ်သွားစေတာမို့ တဖြည်းဖြည်း အရောင်က ပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
ပန်းသီးအရက်ရှာလကာရည် (apple cider vinegar) ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ ပန်းချဉ်ပေါင် ၁ အောင်စတို့ကို ရေတစ်ခွက်စာထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှာကျိုပါ။ အပူပေးနေရင်း အရည်တွေပျစ်လာပြီဆို အအေးခံကာ ဆံပင်ကိုသုတ်လိမ်းပေးရပါမယ်။ ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ ခေါင်းပြန်လျှော်လိုက်ပါ။ ခေါင်းလျှော်ရည်က ဆာလ်ဖိတ်မပါတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ခါနီးတိုင်း ပြုလုပ်ပေးသွားမယ်ဆို လိမ္မော်ရောင်တောက်တောက်ဆံပင်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရောင်ပြောင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။